Sidee Ku Noqoni Karaa Arday Ku Wanaagsan Waxbarashada? |
Wuxuu Itoobiya u Xirnaa 11 Sano, Haddase Muxuu Qabani Karaa?
BBC Somali, May 30, 2018
Jadeecada – Yaa Halis Ugu Jira Jadeecada in ay ku dhacdo?
Miski Cabdinuur Salal, March 3, 2019
Adigoo 25 Jir ah Milkiile Shirkadeed Sideed Ku Noqon Kartaa?
Madaxweyne – Madaxweyne Mid weeye Magac Baahsanna Ma’aha
Ismaaciil Ibraahim Hassan, August 1, 2019
BBC Somali, July 2, 2018
Shan Arrimood oo Ku Saabsan Siddii Loo Dilay Madaxweynihii Hore ee Maraykanka
Tuke Somalism, November 2, 2017
Arrimaha Qoyska & Horumarinta BulshadaGanacsiga iyo DunidaHorumarka & Deegaanka ---OLDMaqal & Muuqaal Arrimaha BulshadaWaxbarashada, Caafimaadka & Diinta Islaamka
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 4, 2016
Waayo aragnimada nolosha ay soo marto ayaa ku dhaliso qofka inuu wax badan ka tilmaamo waayo aragnimadaas. Waxaan mudo soo ahaa arday walina waan ahay waxaana wali rajo kasii qabaa inaan sii ahaani doono arday. Maxaa yeelay nolosha sideedaba waxay u baahantahay in aqoonta iyo cilmiga la raadiyo marwalbo. Cimiga iyo waxbarashada waa shey muhiim u ah guud ahaan nolosha aadanaha.
Dad badan ayaa ardaynimada ku adagtahay, balse waa dad ku saxan arintaas. Ardaynimada ma ahan wax fudud, laakiin cidwalbo arday wanaagsan wey noqoni kartaa. Mawduuceyga ayaa ah inaan wax yar ka faaloodo waxa ay tahay ardaynimada. Ardaynimada waa shey aad u adag inaad ku noolaato marwalbo. Qof mudo arday soo ahaa wuxuu yeelanayaa dulqaad aad u sareeyo. Qofka ardayga waxa loogu baahanyahay inuu diyaariyo dhammaan hawlaha laga sugaayo sidda layli, mashruuc la qoraayo, imtixanaadka iyo guud ahaan arin walbo oo ku salaysan oo waajib kugu ah inaad qabato.
Marka horre haddii aad doonayso inaad noqoto arday wanaagsan waxaa wanaagsan inaad ogtahay muhiimada ay kuu leedahay inaad waxbarato. Waxbarashada ma ahan midda kali oo ku ek inaad barato Joqraafi, Saynis, iyo luuqadaha kale ee dunidda laga isticmaalo. Waxbarashada waa nidaam walbo oo ku tusinaayo in maskaxdaada koreyso haddii aad ku guulaysato waxbarashada.
Waxbarasahda haddii ay noqoto waxbarasho ku salaysan inaad shahaado oo kali sugto ama qaadato waa mid ku saameynayso. Waxbarashadaada yaysan noqonin mid aad ku sugayso shahaado oo kali. Maxaa la yiraahdaa shahaado? Erayga shahaado wuxuu asal ahaantiisa ka imaaday luuqada carabiga, waxaana lagala jeedaa ‘’cadeyn’’. Duxda hadalkeyga ayaa ah haddii aad dhigato iskuul, dugsiga sarre, jaamacad mise meello kale oo cilmi iyo luuqado laga barto marka horre hadafkaada yuusan noqonin inaad shahaado hesho oo kali. Adiga marka horre waxaad ogtahay qiimaha ay kuu leedahay inaad waxbarato, maxaa yeelay haddii hadii aadan ogaani lahayn in waxbarashada qiimo kuu leedahay maba aadeen waxbarashadaas. Waxaa laga maar maan ah in marka horre wada qirsanahay in waxbarashada qiimo aad u sareeyo ay u leedahay nolosheena.
Sideen ku noqoni karaa arday wanaagsan haddii aan ogaaday in waxbarashada qiimo weyn ay ii leedahay? Su’aalahaan oo kale iyo kuwa kale oo lamid ah in maskaxdaada ka guuxayaan ayaa laga yabaa maanta aynu joogto balse waxaan u baahanahay oo kali inaan wada fahano arrimaha inuu gaarga ah ee la xariira nolosheena. Hadalkii oo gaaban, haddii aad doonayso inaad noqoto arday wanaagsan qodobadaan raac:
Habeenkii waqti fiican seexo si ay maskaxdaada u hurdo dharagto. Haddii maskaxdaada hesho hurdo ku filan waxaad soo toosaysaa adigoo fir-fircooni dheeri leh. Qofka bini’aadamka aad ayay u wanaagsan tahay inuu helo hurdo ku filan. Hurdo la’aanta ayaa ka mid ah qofka inuu caajisloow noqdo. Damiirka wanaagsan oo aad waxbarashada u qaadeyso ayaa loo baahanyahay in subaxdii soo kacdo adigoo jirkaada diyaar u yahay inaad shaqeyso.
Dadka si wanaagsan ulla dhaqan. Qaabka aad u dhaqanto aad ayay ulla socdaan bulshada aad ku dhexnooshahay. Bulshada aad ku dhexnooshahay waa illaalo aan laguu dirsanin, marwalbana iska illaali inaad dhaqan xumo la timaado.
Iskuday inaad qabato waxwalbo oo laguu diro. Marwalbo oo laguu diro shaqo ka mid ah shaqooyinka waxbarashadaada waxaa kuugu jirto faa’ido aad u weyn. Macalinka ardaygiisa shaqo umma diro illaa iyo waxaa jiro sawababo loogu diray. Sawabahaas waxaa ka mid ah in ardayga faa’ido ay igu jirto layliga noocaas ah. Macalinka wanaagsan wuxuu marwalbo qorsheeyaa sidda ardaygiisa ku noqoni lahaa arday cilmiga la deris ah. Macalinka wanaagsan marwalbo wuxuu ku dadaalaa siddii ardaygiisa ku noqoni lahaa arday asiga xittaa ka cilmi badan. Muhiimada hadalkeyga ayaa ah marwalbo hawl laguu diro hawshaas dan weyn ayaa kuugu jirto inaad qabato.
Waqtiyada fasalka la galaayo haka daahin, waxaad ogaataa macalin walbo wuu jecelyahay in waqtiga saxda ah lagu imaado fasalkiisa. Macalin walbana ardaygiisa wuu jecelyahay illaa ardayga keeno waxyaabo macalinka ku nacay. Iskuday inaad macalinkaada ixtiraamto. Dhaqamada caadiga ah ee lagu yaqaano Soomaalida ayaa ah dhaqan oo ay aad u qadiriyaan macalimiinta. Qofka macalinka ah aad ayaa loo qadariyaa sidda lagu yaqaano dhaqamada soo jireenka ahaa. Isku day inaad macalinkaada qadirin weyn u muujiyo, maxaa yeelay qofka waxbaranaayo waa adiga ee asiga ma ahan. Inaad si wanaagsan macalinkaada waxaa ka mid ah inaad waqtiga ku wanaagsan ee loogu tala galay inaad ku soo sameyso layliga ku soo sameey. Hadii aad garani weysana u sheeg inaad garani weysay.
Iskuday inaad imtixaanka shaqin oo aad ka koobi gareynin qofkale, mise meelo kalle sidda buugga. Layliga haddii aad garani weysay qofkale ku dheh iga saacid laakiin yuusan kuu qorin. Haddii qofkaas ku yiraahdo waan kuu qoraayo haka yeelin asiga ha kuu sheego adigana qor ka hor inta aadan qorin weydii sawabta ay sidaan sax ku tahay.
Next post Dr. Osaama Cismaan Waa Shaqsi Noocee Ah!
Previous post | Hillary Clinton iyo Barack Obama Ayaa Sameeyay Ururka Isis, Waxaa Yirri Donald Trump?|
Sida Ilma Wanaagsan Loo Soo Saaro
Maxamuud Axmed Muuse, September 12, 2019
Habeenka Aqal Galka